प्रधानमन्त्रीभन्दा अरु कसैले सरकार चलाइरहेको अनुभूति भयो : महेश बस्नेत - Kantipath
प्रधानमन्त्रीभन्दा अरु कसैले सरकार चलाइरहेको अनुभूति भयो : महेश बस्नेत
सांसद महेश बस्नेतले यो सरकार प्रधानमन्त्रीभन्दा अरु कसैले चलाइरहेको अनुभूति भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद बस्नेतले देशको अर्थतन्त्र टाट अवस्थामा रहेकाले यो सरकार प्रधानमन्त्रीभन्दा अरु कसैले चलाइरहेको अनुभूति भएको बताए।
उनले भने, ‘हामीलाई थाह छ, प्रधानमन्त्रीज्युको शारीरिक अवस्था अलिक अस्वस्थ छ। प्रधानमन्त्रीभन्दा अरु कसैले यो सरकार चलाइरहेको अनुभूति हामीलाई हुन्छ। मान्छेहरुले भन्ने गर्छन्, बुढानीलकण्ठमा महाराजहरुले पो यो गरिरहेका छन् कि? बालुवाटारका महारानी, खुमलटारका महाराजहरुले पो यो सरकार चलाइरहेका छन् कि? अथवा कतिपयले भन्ने गर्छन् अनेक खालका स्वार्थ बोकेकाहरुले पो चलाइरहेका छन् कि?’
उनले यो बजेट सरकारको नभएर मन्त्रीको भएको बताए। ‘जनतालाई आहात होइन, आघात गर्ने बजेट आएको छ। सरकार देशको मुटुको रुपमा काम गरिरहेको छैन,’ उनले भने।
उनले बैंकहरु पैसा नभएर टाट पल्टिएको र किसानहरु मलको अभावमा छटपटाइरहेको बताए। ‘महिला हिंसा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। गृह मन्त्रालय बेखबर छ। मूल्य वृद्धि १५ प्रतिशतले बढेको छ। त्रिवि १३९ दिनदेखि बन्द छ। हजारौं युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन्। काठमाडौंमा फोहोरमैला बढेको छ,’ उनले भने। बञ्चरेडाँडामा सरकारले जनतामाथि अश्रुग्यास प्रहार गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।